CDM & Mature Movements
Posted on April 29, 2021 by matupi
By CDM activist Matu BLT
ကျွန်​တော်တို့ကြီးထွားလာဖို့လိုပါတယ်…လူသားများပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိရိစ္ဆာန်​တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ​မွေးဖွားပြီးရင် ပုံမှန်အတိုင် ကြီးထွားလာကြဖို့လိုပါတယ်။အသက်အရွယ်လိုက်ပြီး ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါ အရွယ်အစား၊ အသိဥာဏ်နဲ့ တုန့်ပြန်မှု​တွေရှိလာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Opinion on current Burma’s Political Crisis by the former Japanese ambassador to Burma:
Posted on April 22, 2021 by matupi
စစ်ကောင်စီ အလုပ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဂျပန်သံအမတ်ဟောင်း သုံးသပ်Nikkei သတင်းဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော တိုကျိုမြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ်ဟောင်း တာတီရှိ ဟီဂူချီ Tateshi Higuchi ကို မကြာသေးမီက အင်တာဗျူးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလားအလာ၊ မြန်မာ့အရေးကို ဂျပန်နိုင်ငံက မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်သင့်ကြောင်းတို့ကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
Situation in Christian Blind School in Yangon
Posted on April 14, 2021 by matupi
USA’s Sweeping Effort target on China
Posted on April 10, 2021 by matupi
US’s Containment Policy will be indirectly or directly helping to solve the current Burma crisis. Though it is not the main interest for the US to take action on Burma, however, the current geopolitical scenario demanded the US ought to solve the problem of Burma. By doing so, which will gain double credit to the United States and her allies in the global arena without spending extra expenses under “Containment policy”
Filed under: 1 General News,3World News |	Leaveacomment »
Posted on April 9, 2021 by matupi
UNSC’s result bring “Hope of Light at the end of Tunnel”
Dream of World Power vs China’s Plan on USA
Posted on April 5, 2021 by matupi
Chinese Foreign Minister Wang sharply criticized coordinated sanctions against Beijing by the EU, Britain, the US and Canada over human rights abuses against Uyghur Muslims in China’s far western Xinjiang region.
အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ဆို့မှု ဘယ်နေရာတွေမှာ ထိခိုက်နစ်နာနေသလဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ကစ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းမှာ ကုမ္ပဏီတစ်ချို့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ 2600MHz လှိုင်းနှုန်း အသုံးပြုပြီး Wireless Broadband Data Service စနစ်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေတဲ့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ စစ်ကောင်စီက ညွှန်ကြားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု စနစ် ၅ မျိုးရှိတဲ့အနက် မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းကဒ်တွေကနေ တဆင့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့စနစ်၊ ဝိုင်ဖိုင် နည်းပညာနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ စနစ် ၂ မျိုးကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကျော် ကတည်းက ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။